Fomba roa samihafa hametrahana Google Chrome amin'ny Fedora 31 | Avy amin'ny Linux
Aorian'ny nahombiazanao tamim-pahombiazana mametraka ny Fedora 31 amin'ny solosainao na amin'ny milina virtoalyo, misy zavatra maromaro tokony hatao hahafahanao manamboatra ny rafitra ary mahatsapa mahazo aina kely kokoa. Ny Fedora dia mampiditra an'i Firefox amin'ny alàlan'ny default amin'ny maha-mpitety tranonkala, na dia ho an'ny tranga maro aza (Ampidiriko ny tenako) aleony mampiasa Chrome / Chromium.
Izany no antony amin'ity indray mitoraka ity hizara an'ity lahatsoratra ity aminao izahay ho an'ireo izay tsy mahay mametraka Chrome amin'ny Fedora 31 miaraka amina fomba roa samy hafa, ahafahan'izy ireo mametraka ity browser ity amin'ny rafitr'izy ireo.
1 Mametraka Google Chrome / Chromium avy amin'ny tahiry
2 Mametraka Chrome amin'ny fonosana RPM
Mametraka Google Chrome / Chromium avy amin'ny tahiry
Ny fomba voalohany izay zarainay, hahafahantsika mametraka Google Chrome, Amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny tahiry an'ity ao amin'ny rafitra.
Ho an'ity andao hanokatra ny ivon-toeran'ny rindrambaiko, izay ahafahantsika mikaroka Chromium hahafahantsika mametraka azy amin'ny rafitra (raha tianao izany). Raha ho an'ireo izay tia Chrome andao tsindrio ny menio hamburger izay ao amin'ny ankavia havia.
Eto dia hisokatra ny menio ary hofidintsika ny safidy "Repositories an'ny lozisialy". Hisokatra ny varavarankely vaovao ary hisokatra isika tsindrio ny safidy tokana dia ny "bokotra ahafahan'ny repositories an'ny antoko fahatelo".
Raha vantany vao vita izany dia hiseho safidy bebe kokoa, izay ahafahantsika mamela ny tahiry samihafa ho an'ny rafitra. Amin'izy ireo sy anisan'ireo safidy voalohany azontsika jerena ny "Google" izay azontsika atao amin'ny alàlan'ny fanindriana azy ary avy eo amin'ny bokotra "Activate".
Manidy ny varavarankely izahay izao ary tsy maintsy havaozina ireo trano fitahirizana. (Raha ny amiko dia tsy nitranga izany, saingy azo havaozina izy ireo amin'ny alàlan'ny fanokafana terminal ary ao anatiny no ampiasantsika ny fanavaozana sudo dnf).
Afaka mametraka Chrome isika avy amin'ny terminal amin'ny fanoratana:
Ho an'ireo izay tia kinova fitsapana:
Na ho an'ireo izay te-hametraka Chromium amin'ny terminal, azon'izy ireo atao izany amin'ny fanoratana ity baiko manaraka ity ao aminy:
Ity dingana ity dia azo atao amin'ny terminal ihany koa, ao anatin'io no mila soratantsika fotsiny ny baiko manaraka hahafahana mamela ireo tahiry fanampiny:
Vita ity mila manoratra "y" fotsiny isika hanohy. Aorian'izay, hamelomantsika ny toerana anafihan'i Google ao amin'ny rafitra, izay ataonay amin'ny fanoratana:
Farany hametraka ny navigateur dia soratantsika fotsiny:
Na hametraka kinova beta sy kinova tsy marin-toerana.
Mametraka Chrome amin'ny fonosana RPM
Ny fomba hafa hahafahanao mametraka an'i Google Chrome amin'ny Fedora 31 dia misintona ny fonosana RPM avy amin'ny tranokala mivantana avy amin'ny tranonkala ofisialin'ity. tAzonao atao izany avy amin'ny rohy manaraka.
eto hofidintsika fa te hampidina ny fonosana RPM izahay ary hanaiky ny teny fampiasan'ny mpitety tranonkala eo am-baravarankely izay misokatra hisintona ny fonosana izahay.
Raha vantany vao vita ny fampidinana dia handeha any amin'ny fampirimana fampidinana izahay (io no toerana misy anao), raha nifidy toerana hafa ianao dia tsy maintsy mankany.
Eo amin'ny fampirimana izay itahirizantsika ny fonosana rpm avy amin'ny Google Chrome, manana fomba roa hametrahana azy izahay. Ny voalohany dia amin'ny mpitantana ny fonosana rafitra. Izany hoe, fipihana indroa amin'ity ary hisokatra ny ivon-toeran'ny rindrambaiko, izay tsy hangataka fanamafisana hametrahana ilay fonosana.
Ny fomba hafa hametrahana ilay fonosana dia avy amin'ny terminal, izay tsy maintsy apetrantsika ao anatin'ny folder izay itahirizantsika ny fonosana rpm.
Raha ny toerana misy anao, izay sintomina, dia amin'ny alàlan'ny fanoratana fotsiny no idirantsika ity folder ity:
Y Azontsika atao ny mametraka ny fonosana rpm amin'ny fampiharana ity baiko manaraka ity:
Ary vonona miaraka amin'izany, azonao atao ny manomboka mampiasa an'ity browser ity amin'ny fametrahana ny Fedora 31 vaovao anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Fomba roa samihafa hametrahana Google Chrome amin'ny Fedora 31